यस्तो हुनेछ जापानमा कोरोनाभाइरस विरोधी भ्याक्सिन लगाउने प्रक्रिया | Nepali In Japan
जापानले गत महिनादेखि पहिलो चरणको कोरोना भाइरस विरोधी खोप कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले जापानमा खोप लगाउँदा के के हुन सक्छ र खोपको टिकट पाएपछि खोप लगाइने प्रक्रियाबारे बताउन गइरहेका छौं ।
खोप कसले पाउँछ ?
– सरकारले जापानका सबै बासिन्दाहरुलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउनेछ । यसमा विदेशी बासिन्दाहरु समेत १६ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका सबै पर्नेछन् ।
– खोप बाध्यकारी छैन । खोप नलगाउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था पनि छैन । तर योग्य सबै बासिन्दालाई खोप लगाउन अनुरोध गरिनेछ ।
– तपाईलाई ज्वरो आएको छ, वा कुनै गम्भीर रोग लागेको छ वा खोप लगाउँदा गम्भीर खालको एलर्जी भएको इतिहास छ भने खोप लगाउन दिइदैन ।
– स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुसँगको सल्लाहमा गर्भवती महिलाहरु पनि खोप लगाउन योग्य छन् । तर यसका लागि स्वास्थ्य पेशाकर्मीहरुसँग परामर्श लिनुपर्नेछ । पहिलो त्रैमसमा भने गर्भवतिलाई खोप नलगाउन सुझाव दिइएको छ ।
लगाउन थालिएको व्यक्तिको सहमति बिना खोप लगाइदैंन । कार्यस्थल वा विद्यालय आदिले तपाईलाई खोप लगाउन बाध्य बनाउन सक्दैन ।
फेब्रुअरी १७ः स्वास्थ्य कामदारहरुले खोप लिन थालेका छन् ।
– यस समूहमा डाक्टर, नर्स र कोरोना संक्रमितसँग बारम्बार सम्पर्कमा आइराख्नु पर्ने अन्य कर्मचारीका साथै औषधि विक्रेता, बिरामीको ओसारपसार गर्ने चालक र जापान तट सुरक्षाका सदस्य र आत्म रक्षा बलका जवानहरु रहेका छन् ।
फेब्रुअरी २२ मा शुरु भएको हप्ताः देशभर रहेका सय अस्पतालहरुमा ४० हजार स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई खोप लगाउन थालियो ।
मध्य–मार्चः बाँकी रहेको ३७ लाख स्वास्थ्य कर्मचारीलाई खोप लगाउन प्रणालीको स्थापना गरिनेछ ।
अप्रिलः ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरुलाई खोप लगाउन थालिनेछ । यस समूहमा करीब ३ करोड ६० लाख मानिसहरु पर्दछन् ।
– यसपछि अर्को चरणमा दीर्घ रोग भएका ८२ लाख मानिसहरुको पालो आउनेछ ।
– यस समूहमा मुटु र मृगौलासम्बन्धी दिर्घ रोग भएका, स्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या भएका, क्यान्सर लगायत शरीरको प्रतिरक्षा कार्य घटाउने रोग लागेका बिरामीहरुको साथै स्लिप अप्निया सिन्ड्रोम भएका अनि बडी मास इन्डेक्स ३० वा सोभन्दा कम भएका व्यक्तिहरु रहेका छन् ।
– यस पछि भने वृद्धवृद्धाहरुको हेरचाह केन्द्रमा काम गर्ने करीब २० लाख मानिसहरुको पालो आउनेछ ।
– खोप लगाउन त्यसपछि भने ६० वर्ष देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका करीब ७५ लाखलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
सन् २०२१ को गर्मीयाममा भने १६ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका बाँकी सबै सर्वसाधारणलाई खोप लगाउइने अपेक्षा गरिएको छ ।
खोपका लागि साइन अप कसरी गर्ने ?
स्थानीय नगरपालिकाहरुले केन्द्र सरकारको निर्देशनमा खोप लगाउन कार्यक्रम शुरु गर्नेछन् ।
१. तपाईले आफ्नो हुलाक ठेगानामा स्थानीय सरकारबाट खोपका लागि एक टिकट र जानकारी पाउनु हुनेछ ।
२. खोप लगाउनका लागि तपाईको नगरपालिकामा रहेको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्र खोज्नुहोस् ।
– खोप केन्द्रमा स्वास्थ्य संस्था, सार्र्वजनिक हल र व्यायामशाला आदि रहेका छन् ।
– सिद्धान्ततः तपाईले आवासीय कार्डमा उल्लेख रहेको आफू बसोबास गर्दै आउनु भएकै नगरपालिकामा खोप लगाउन पाउनु हुनेछ । तर आवासीय विद्यालयका विद्यार्थी घरेलु
हिं’साका पीडित, आफ्नो घरभन्दा टाढा बसेर काम गर्ने लगायत केहीको हकमा भने यो लागू नहुन पनि सक्छ । यिनीहरुले नगरपालिकालाई पहिला नै जानकारी दिएर अर्को नगरपालिका पनि खोप लगाउन सक्छन् ।
३. टिकट लिँदा पाएको निर्देशन पछयाउँदै फोन गर्नुहोस् वा अनलाइन रिजर्भेशन गर्नुहोस् ।
४. खोप लगाउने स्थलमा आफ्नो खोप टिकट र व्यक्तिगत पहिचान पत्र लिएर आउनुहोस् ।
५. खोप टिकट लिएर आएपछि खोप लगाउन कुनै शुल्क लाग्दैन ।
खोप लगाउने स्थलमा
१. खोप केन्द्रले तपाईको खोप टिकटमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् ।
२. तपाईको तापक्रम लिइनेछ । तपाईलाई ज्वरो आएको छ भने खोप लगाउन पाउनु हुन्न ।
३. आफूलाई विगतमा खोप लगाएपछि गम्भीर खालको एलर्जी भएको थियो कि थिएन अनि कुनै औषधि खानु भएको थियो कि थिएन कि गर्भवति पो हुनु हुन्छ कि भन्ने जानकारी दिन फारम भर्नुहोस् ।
४. फारममा दिनु भएको उत्तरका आधारमा डाक्टरले तपाईलाई केही प्रश्न सोध्नेछन् ।
५. सबै कुरा चेकजाँच गरेपछि तपाईलाई खोप लगाइनेछ ।
६. खोप लगाएपछि खोप स्थलमा १५ देखि ३० मिनेटसम्म कुर्न भनिनेछ । फाइजरको हरेक २ लाखमा एक जनालाई एनफलक्सस नामक गम्भीर खालको एलर्जी भएको पाइएको छ । यसको लक्षणमा छालामा बिबिरा आउने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने लगायत लक्षण देखिन्छ ।
खोपको दोस्रो डोज पनि लगाइसकेकाहरुले प्रमाण–पत्र पाउनेछन् । यस प्रमाण पत्रमा खोप लगाइएको मिति र कुन खोप लिएको हो भन्ने लगायत जानकारीहरु हुनेछ ।
खोप भन्डारण सम्बन्धी जानकारी
खोपको पहिलो डोज लगाएपछि यससम्बन्धी जानकारीहरु क्लाउडमा आधारित राष्ट्रिय डेटाबेसमा तत्कालै रेकर्ड गरेर राखिनेछ । यो डेटाबेस अप्रिलको मध्यसम्ममा स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ । जानकारीलाई तपाईको १२ नम्बरको माइ नम्बर कार्डसँग पनि आबद्ध गरिनेछ । कसैले खोपको टिकट हरायो वा पहिलो डोज लगाएको शहरभन्दा अर्को शहरमा खोप लगाउनु पर्ने भएको लगायत अवस्थामा सहज होस् भनेर डेटाबेस बनाइएको हो ।
बूष्टर डोज र खोपको प्रकार
जापानले फाइजर, मोडेर्ना र अस्त्रजेनेकासँग खोप प्राप्त गर्न सम्झौता गरेको छ । यी तिनै कम्पनीको कोरोना भाइरस विरोधी खोप दुई डोजमा लगाउनु पर्छ । २१ दिनको अन्तरमा फाइजरको २ खोप लगाइनेछ । मोडेर्ना र अस्त्रजेनेकाको खोप पहिलो र दोस्रो डोजबीच २८ दिनको फरकमा दिइनेछ ।
जापानमा अनुमति पाउने पहिलो खोप फाइजरको हो । यसलाई फेब्रुअरीको १४ मा अनुमति दिइएको थियो । सरकारले जुनको अन्त्यसम्ममा सबै नागरिकलाई पर्याप्त पुग्ने खोप सुरक्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अस्त्रजेनेकाले पनि फेब्रुअरीको शुरुमा खोप प्रयोगका लागि अनुमति माग्न आवेदन दिएको छ । मोडेर्नाले भने मे अघि आवेदन दिने सम्भावना देखिएको छैन । यही गर्मीयाममा टोकियो ओलम्पिक्स शुरु हुनु अघि जापानमा सबैलाई खोप लगाउन नभ्याइने देखिएको छ ।
Tagged in corona vaccine
Prevजापानमा बिजुलीका पोलहरु जमिनमुनि किन गाडिएको छैन ?
Nextयि हुन जापानमा अधिक प्रयोग हुने ‘वासेई एइगो’